Fraịdee 7 Mee 2021
Echichi Desktọpụ Osisi Osisi bụ nrụnye desktọọpụ maka ọhụhụ anya. A na-eme ka ọgba aghara nke ikuku ikuku dị ka ihe mkpuchi dị ka ọkụ ndị na-esite n'okpuru ebe a maka ụwa na-enweghị ike ndọda. Echichi na-eme ka akaghị ike na-enweghị njedebe. Ọ na-eduzi ahịrị nke anya gburugburu ya ịchọ ebe mbido ma ọ bụ njedebe ka ndị na-ege ntị na-eji egwu mmiri egwu.
Tọọzdee 6 Mee 2021
Nrụnye Mmekọrịta Mmiri na-akụda bụ ntọala nke nrụnye ihe na-enye ohere ka ndị ọrụ gbanwee ụzọ na-agba ọsọ gburugburu cube ma ọ bụ cubes. Nchikota cubes na iyi iyi a na –eme ka ihe di iche na ihe miri emi. Enwere ike ịdọrọ iyi ahụ ka ọ dị ka beads na-agba ọsọ ma ọ bụ tinye ya na tebụl dị ka ebe mmiri jụrụ oyi. A na-atụlekwa chaplet dị ka ndị mmadụ na-eme kwa ụbọchị. Ekwesiri ka eke ya agbụ ma gbaa ọsọ ruo mgbe ebighi ebi.
Tiuzdee 4 Mee 2021
Mpempe Tii Ite tii bụ igbe na-ejide eluigwe na ụwa nke kachasi mkpa na-eche ka ahapụ ya. Ileba anya na oghere ị nwere ike ịchọta usoro nke ọwa dị ike nke na-agbasa n'etiti okpu. A na-ahụ ihe owuwu ahụ na akpụkpọ ahụ dị n’èzí. Ahụ dum na-egosiputa ụdị vaporized nke ndị mmadụ ga-ahụ anya ma nwekwa obi ụtọ ụbọchị niile.
Ifuru The Anya bụ ifuru osisi maka oge niile. A na-eji ọla edo mechie oghere ndị na-adịghị anya dịka anya mmadụ nke na-achọ mgbe niile maka ihe dị ebube na Nature Mama. Guzo na-eme ihe dị ka ọkà ihe ọmụma. Ọ hụrụ n'anya sitere n'okike ma gosipụta ụwa niile maka gị tupu ma ọ bụ mgbe ịmechara ya.
Ngosipụta Mmekọrịta Desktọpụ
Mbọsị Ụka 2 Mee 2021
Ngosipụta Mmekọrịta Desktọpụ Ezubere desktọpụ ọrụ a bụ iji mee ka ndị mmadụ nwee nrọ ụbọchị. A na-edozi oghere ndị ahụ ma tinye ya na ifuru, lollipops, ma ọ bụ isiokwu ndị na-abanye n'ụkpụrụ ya site n'ọdịdị dịgasị iche iche. Akụkụ chrom ahụ a na-ahụ anya na-agbanwe ma na-agbanwe ụda olu na isiokwu egosipụtara na ndị mmadụ na-emekọrịta ya.
Chirming Akwụkwọ Mmado Satọdee 16 Ọktoba
Santander World Ihe Eji Eme Ihe N’Obodo Fraịdee 15 Ọktoba
Oli Nnukwu Oliv Tọọzdee 14 Ọktoba
Echichi Desktọpụ Nrụnye Mmekọrịta Echichi Etiti Mpempe Tii Ifuru Ngosipụta Mmekọrịta Desktọpụ